Ihe mgbochi mgbochi ọrịa
Ngwongwo anụ ụlọ
New ladies obere akpa ipigide ba ...
Ladies obere akpa ogologo ngalaba ...
Obere akpa ụmụnwaanyị ọhụrụ Zip ...
Ụmụ nwanyị ejiji dị obere obere ...
Mpempe akwụkwọ DuPont a na-apịaji, nke nwere ike ịsacha na nke na-adịgide adịgide na akpa ịzụ ahịa nwere ike ịmegharị ọzọ
Akụrụngwa bụ pulp fiber eke, nke na -enweghị ihe ọ bụla na -emerụ ahụ, na -acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na gburugburu ebe obibi, na -emebi emebi, enwere ike megharịa ya, saa ya ọtụtụ ugboro, ma ka na -ejikwa njirimara mbụ. Na -eguzogide ịdọka na nrụrụ.
Akpa nri akwụkwọ nri Dupont dị mma na gburugburu ebe obibi, ahụike, reusable, foldable, na-asachapụ, na-adịgide, nchekwa ọkụ na akpa nchekwa ọhụrụ.
Akwụkwọ DuPont enyi na enyi na ahụike dị mma akpa akpa njem ndụ ụlọ ahaziri ahazi dị mfe ma dị mma
Akwụkwọ DuPont nwere ọmarịcha gburugburu ebe obibi ahaziri akpa ndụ kọmputa akpa akpa egwuregwu kọmputa dị mfe ma mara mma
Reusable Dupont a gwara akwụkwọ Tote akpa, foldable, kewasiri, inogide na-eri eri na-àmà kpochapụwo aja aja
Akpa akpa akwụkwọ DuPont a na-eji emegharị emegharị, nke a na-apịaji, nke a na-asachapụ, nke na-adịte aka ma na-agbapụtakwa ụmụ nwoke agba aja aja, ụmụ nwanyị, ụmụaka na-arụ ọrụ, ụlọ akwụkwọ, picnic, osimiri, akpa njem
Akpa laptọọpụ laptọọpụ 17.3 Inch Nnukwu njem ụmụ nwoke Laptop Akpa Azụmahịa Business Waterproof
*Ihe na-adigide: Akpa a na-ejikọ laptọọpụ a bụ nke polyester siri ike, mmiri anaghị egbochi mmiri na-adọka. Site na oghere laptọọpụ padded dị iche, dabara maka ọtụtụ kọmpụta 13, 14, 15, 15 inch, 15.6, 16, 17, yana ruo sentimita 17.3 / Ipad / kọmpụta.
*Ikike buru ibu: nha akpa akpa laptọọpụ ụmụ nwoke a bụ 35 x 23x 47 cm, nke enwere ike iji ya maka nnukwu nchekwa ma nwee ike ịnabata oghere nzukọ maka obere ihe. Enwere oghere ime ụlọ atọ sara mbara nke nwere ọtụtụ akpa zoro ezo, nke nwere ike ijide ọtụtụ ihe, dị ka akụrụngwa mahadum, ngwa njem, uwe, akwụkwọ, akwụkwọ ndetu, na akpa zipa n'akụkụ nwere ike ijide karama mmiri na nche anwụ maka ịnweta ngwa ngwa.
*Na-eku ume na nkasi obi bag akpa laptọọpụ ergonomic a maka ụmụ nwoke nwere sponge na-eku ume nke ukwuu na eriri azụ na ubu, nke nwere ike belata nrụgide ubu wee mee ka azụ ahụ kpọọ nkụ ma nwee ntụsara ahụ ogologo oge. Eriri ubu a na -edozigharị na njikwa ntụsara ahụ siri ike na -enye nkasi obi dị ukwuu maka ọrụ, oge ezumike, njem, ọrụ na ụlọ akwụkwọ.
Aha: azu paaki azụmahịa ejiji
Agba: nwa, aja aja, isi awọ
Akwa: akwa Oxford na -enweghị mmiri
Akpa ọrụ azụmaahịa laptọọpụ dị larịị nke nwere eriri akpa USB na -ebugharị ọdụ ụgbọ mmiri dabara na laptọọpụ inch 13.3
*Ọ dị mfe ịhazi: Ọtụtụ akpa na oghere oghere na-edobe ihe gị niile. Nnukwu nnukwu ụlọ na-ejigide ihe ndị dị mkpa kwa ụbọchị gị, dị ka nha A4, uwe, ngwa njem, akwụkwọ, nche anwụ, na ihe ndị ọzọ dị mkpa.
*Nkasi obi & na-adịgide adịgide: ejiri polyester mmiri na-eguzogide mmiri mee ya. Ọ dabara maka ojiji kwa ụbọchị. Enwere ike iji obere akpa laptọọpụ anyị dị larịị dị ka akpa azụmaahịa laptọọpụ azụmaahịa, akpa njem njem, akpa akwụkwọ ọfịs, obere akpa ụmụ akwụkwọ kọleji maka ụmụ nwoke, ụmụ agbọghọ, ndị na -eto eto, ndị okenye.
*Akpa akpa ọtụtụ: akpa mmiri na-adịghị mma na-enye ụdị ntụsara ahụ na nke adịghị mma maka iji ya kwa ụbọchị yana ebe ọ bụla maka ụlọ akwụkwọ sekọndrị, ụlọ akwụkwọ sekọndrị, kọleji, ezumike, njem, njem izu ụka, njem abalị, njem azụmahịa, njem oge ụfọdụ.
*Ergonomic Design: Ergonomic design of S-shape padded straps and padding design, nke emere site na akwa na-agbanwe agbanwe na akwa na-eku ume, nke nwere ụdị mgbanaka na-agbanwe agbanwe, dozie ogologo eriri ahụ n'enweghị ihe ọ bụla, belata ibu ibu, chekwaa azụ na ubu n'ụzọ dị irè, na -adịcha mma maka ndụ gị
*Ọdụ Nchaji USB: Akpa azu laptọọpụ na -enye ọdụ ụgbọ mmiri USB na mpụga. Ọ dị mma maka ịchaji ekwentị gị ma ọ bụ ngwaọrụ eletrọnịkị ọzọ mgbe ị na -eje ije. (Biko mara na agunyeghị ụlọ akụ ike)
Onye na-ejide kaadị kpuchiri obere akpa nwere obere akpa na-agbasawanye obere akpa obere akpa-obere akpa ụmụ nwoke
*Nke a bụ usoro obere akpa kaadị nwere ike ịgbasa, kọmpat, nchekwa yana dabara maka oge dị iche iche. Ọ dị gịrịgịrị n'akụkụ niile wee jiri nlezianya hazie ya ka ibelata obere akpa.
*A na-eji obere eriri nwere ike gbasaa obere akpa ya nke ọma, ọ nwere ike ijide kaadị 8, nke enwere ike ịtinye ma wepu ya ngwa ngwa na ngwa ngwa. Na mgbakwunye, onye na-ejide kaadị kredit anyị na-eji ahụ aluminom mara mma nke anodized, nke siri ezigbo ike mana ọ dị fechaa.
*Obere akpa a na -eme ka echedo kaadị na -enweghị kọntaktị. Site na njide kaadị kredit anyị echedoro, ọ nweghị onye nwere ike ịnweta data gị.
Mkpa ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị obere obere akpa obere akpa-akpụkpọ anụ kaadị ikpe n'ihu obere akpa ụmụ nwoke dị gịrịgịrị RFID na-egbochi njide kaadị kredit pere mpe.
* Ejiri aka mee, na-adigide: obere akpa a pere mpe ejiri akpụkpọ anụ juru eju mee ya nke ọma. Na -atụ anya na ọ ga -adịgide ruo ọtụtụ afọ!
* Nhazi obere: obere na kọmpat, ahaziri maka mkpa gị, ọ nweghị ihe ọzọ. Njirimara: oghere kaadị 4, windo ID 1 na oghere ego 1. Akụkụ: 11 x 8.0 x 1.0 cm.
* Teknụzụ igbochi RFID: iji hụ na ọ dị mfe ịnweta oghere mkpịsị aka yana igbochi RFID na kaadị kredit, kaadị debit, akwụkwọ ikike ịnya ụgbọ ala na kaadị ID. (Rịba ama: obere akpa a nwere ike ọ gaghị enwe ike igbochi baajị ID, kaadị ịnweta ma ọ bụ kaadị ime ụlọ nkwari akụ na-arụ ọrụ na obere oge [120-150 KHz]).
* Onyinye zuru oke: Ọ na -abịa na igbe onyinye dị mma, ọ bụ nhọrọ kacha mma maka onyinye azụmaahịa, onyinye ụlọ ọrụ, ụbọchị ọmụmụ, ncheta afọ, ekeresimesi, ụbọchị nna, ụbọchị ịhụnanya, ndị na -alụ nwanyị ọhụrụ, nwoke kachasị mma na ihe omume pụrụ iche ndị ọzọ.
Wallet-RFID mgbochi na-egbochi ohi teknụzụ na-eji obere akpa ego, ihe na-echebe kaadị na-agbasawanye obere akpa obere akpa-obere akpa ụmụ nwoke.
*Teknụzụ igbochi RFID: obere akpa echedoro iji chedo njirimara gị; gbochie ndị ohi inyocha ngwaọrụ; Teknụzụ RFID na -echebe ozi nkeonwe gị yana nchekwa kaadị kredit; na -eme ka nzuzo na nchekwa gị dị.
*Ọcha dị oke oke na oke ọkụ: na-ebu ego (ihe ruru akwụkwọ mpịakọta 9) na kaadị 1-12, dị ka akwụkwọ ikike ịnya ụgbọ ala, paspọtụ, kaadị kredit, mkpuchi, kaadị debit, kaadị nchekwa ọha na kaadị azụmaahịa. Ahụ dị oke oke na oke na-eme ka ọ dị mma maka ndụ kwa ụbọchị ma ọ bụ njem.
*Onye na-ejide kaadị kredit anyị nwere ọmarịcha anodized aluminom ahụ, nke siri ezigbo ike, mana ọ dị fechaa.
*Akpa obere akpa ejiri kaadị emebere bụ ezigbo onyinye maka enyi, di ma ọ bụ onye ọchụnta ego n'ụbọchị Valentine ma ọ bụ ụbọchị ọmụmụ.
Ọhụrụ PC trolley case foldable nchekwa njem akpa
Journey Njem na-enye ọ pleasantụ: A na-eji akpa PC nwere akwa akpa akwa apịaji, nke dị nfe ma nwee mmetụta na-eguzogide.
Aka ahụ a na-agbanwegharị dị elu na-ewepụ mkpa ọ dị ịkpa azụ gị azụ; ị nwedịrị ike itinye obere akpa na ihe ndị dị mkpa na ya. N'ime ime ya nwere eriri mbukota nwere ike idobe uwe gị.
● Ma ị na -eme njem maka azụmahịa ma ọ bụ ezumike, ị nwere ike zụta na ntụkwasị obi zuru oke.
Copyright - 2010-2020: Ikike niile echekwabara. ,